Benzalkonium chloride: yokusetshenziswa, ukwakheka kanye nencazelo. Benzalkonium chloride: izidakamizwa
Imiphi imithi aqukethe ikhemikhali, ezifana benzalkonium chloride? Amalungiselelo nale isithako uzobe ezibalwe ngezansi. Futhi, uyofunda ngalokho izakhiwo it has, okuyindawo iqondiswa nokuthi kufanele lisetshenziswe nini kahle.
Benzalkonium chloride - umuthi, oyingxenye kwezidakamizwa eziningi. Kuyinto kwakwakhe ammonium futhi kukhiqizwa ngesimo powder emhlophe noma aphuzi-white. Futhi leli thuluzi kungabonwa ngesimo mass gelatinous, encibilikayo otshwaleni, amanzi, acetone, futhi cishe zingaxazululeki ether.
Benzalkonium chloride luyinto asebenzayo. Kuye uhlobo umuthi, kungenziwa kulekelelwa nezinye izithako.
Benzalkonium chloride eziqukethwe isixazululo ukusetshenziswa yangaphandle, iso amaconsi, ahlukahlukene okhilimu, suppositories, amaphilisi, amaphilisi kanye ukugxilisa ingqondo liquid magciwane kwezakhiwo.
Yikuphi anezakhi kwemithi ye benzalkonium chloride? Ukwakheka kwale nto kuwukuthi uyakwazi banethonya isinyathelo umuthi kanye nemiphumela spermicidal kanye isinqandakuvunda.
Ngemuva kwesicelo kubhekwe izindlela linamathele ulwelwesi cell, bese wasithukuthelela nezilwanyana ezincane ezithile futhi lipoproteins isidoda ukuthi ekugcineni kuholela umonakalo ka ulwelwesi kanye yokufa kwamangqamuzana engokwemvelo.
Benzalkonium chloride has umsebenzi anamandla amagciwane ngokumelene namagciwane abangela izifo, kuhlanganise Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas futhi Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, namanye amagciwane. Wabuye izenzo fungicidal nangokumelene isikhunta.
izakhiwo Spermicidal yalolu ketshezi ziyabonakala lapho kubhujiswa lesi msila ikhanda isidoda futhi igebe, okuyinto kuvimbela esibelethweni elivundisiwe.
isithako Okubukwe akuyona amuncwa ukusetshenziswa intravaginal, kodwa luhlala kuya mucosa lwesitho sangasese sowesifazane kanye iqedwe emva ukugeza ngamanzi eyedwa noma kanye uketshezi bokuphila.
Umthelela umuthi we ketshezi iqala imizuzu 10 emva ukusetshenziswa amaphilisi noma amaphilisi, ngemva kwemizuzu engu-5 lapho zaphathwa suppositories lwesitho sangasese sowesifazane kanye 3 - ngemva kokufaka i-ayisikhilimu.
Ubude besikhathi spermicidal isinyathelo we ketshezi ingase yehluke kuye ngesistimu ngesimo ukulungiswa (kusukela 3 amahora izinsuku). Kufanele kuqashelwe ukuthi iyiphi nomuthi owethulwa intravaginally, kuzonciphisa umphumela isithako spermicidal. By the way, isixazululo iodine futhi inactivates ejenti eziqukethe benzalkonium chloride (suppositories, okhilimu, amaphilisi, njll).
isixazululo Lwangaphandle benzalkonium chloride adingekayo eyinhloko eyinhloko imisiwe ukwelashwa isilonda kanye nokuvimbela ukutheleleka yesibili esibhedlela izinhlobo zama-bacterium (for ukusha, ukulimala kwamathambo nezicubu esithambile). Lokhu kusho futhi libeke khona amanxeba purulent, ukuze liphume igazi ithambo izimbotshana emva kokuhlinzwa osteomyelitis.
mass obukhulu noma ukhilimu chloride benzalkonium elisetshenziswa paraproctitis, ukusha olukha phezulu ezishisayo, izilonda trophic, nonhealing amanxeba kwezicubu ezithambile (kuhlanganise ukutheleleka), izifo ezingelapheki ukuvuvukala kwesikhumba eziye asethuthukile ngifundise ngesifo sikashukela.
Benzalkonium chloride e iso amaconsi iziphatha kahle Ukubhidliza ongaphakeme, lagophthalmos ukusonteka leminyaka, ectropion nangemva blepharoplasty. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa ezinjalo ebekiwe izilonda trophic nokuguguleka kwenhlabathi corneal, ke bullous izinguquko dystrophic keratopathy, ukusha ezishisayo conjunctiva keratoektomii, microdefects epithelium corneal ngemva keratoplasty.
Tablets, suppositories, amaphilisi ngoba ukhilimu intravaginal futhi tampons zenzelwe zokuvimbela inzalo sendawo nabesifazane asebeneminyaka efanele yobudala zokuzala. Ngokuvamile, ama-ejenti enjalo bebhincile contraindications IUD futhi wamukele izinto zokuvimbela inzalo temlomo, kanye esikhathini kwangemva kokubeletha, ngesikhathi lactation, i-ukuphila ngokobulili okungajwayelekile, ngemva isisu futhi abesifazane premenopausal.
I CONCENTRATE liquid benzalkonium chloride isetshenziselwa magciwane kwezakhiwo, kanye nemikhiqizo kanye kwemishini yezokwelapha.
Benzalkonium chloride - uyakulondoloza kanye isinqandakuvunda, okuyinto kungenzeka ingasetshenziswa uma:
izimila abulalayo kwesikhumba.
Kepha Izimo intravaginal amafomu izidakamizwa, isimo elandelayo osebenza kubo:
ukucasulwa ubala futhi ulceration we ulwelwesi lwamafinyila kwesibeletho noma esithweni sangasese somuntu wesifazane;
Indlela isicelo we ketshezi incike kundlela odinga ngayo lelo ngayo.
Isixazululo sangaphandle buhlanjululwe ngamanzi (distilled) ukuze lokuhlushwa 1%, bese it is elifakwe gauze kusaladi, swabs noma esula zizosetshenziswa isilonda.
Inhlama noma ukhilimu is isetshenziswa ebusweni isilonda, owawuke nahlanza ezicutshini futhi necrotic izinguquko ubovu (based 0.25-0.45 g / 1 sq. Cm). Ungasebenzisa futhi gauze noma turundy afuthwe ngesibulali izidakamizwa. Umthamo esiphezulu sale imithi ngelanga kuyinto '50 amabhandeshi washintsha nsuku zonke amasonto amabili.
Suppositories ngoba zokuvimbela inzalo afakwa esithweni sowesifazane, elele emhlane wakhe. Kwenze imizuzu emihlanu ngaphambi kocansi. Isikhathi isenzo nomuthi 4 ihora.
amaphilisi Intravaginal nazo afakwa esithweni sowesifazane, lisalele, ngilithole emizuzwini eyishumi ngaphambi kocansi. Isikhathi isinyathelo zomuthi 3 ihora.
Cream is busuka sangasese usebenzisa dispenser-nokokuyifaka (mhlawumbe amanga isikhundla). isenzo sayo eba ngokushesha ngemuva kwesicelo futhi kuthathe amahora 10.
Ngokusho imiyalelo, capsule entsha, ukhilimu ingxenye, ikhandlela noma ithebhulethi angafakwa njalo uma okuphindaphindiwe izenzo zocansi.
THE TAMPON kumelwe asuswe iphakethe, bese uhlele umunwe phakathi phakathi evele yayo flat. labia Sahlukana Ngakolunye uhlangothi, kuyadingeka ukuze kuthuthukiswe ku sangasese ukuze wesibeletho ukujula.
Isenzo yalesi izidakamizwa ithuthukiswe ngokushesha futhi ihlala cishe usuku. Ngalesi sikhathi ama-swab akumele ushintshwe, ngisho nangemva kokuyalwa kaningi ocansini. Kuyinto efiselekayo ukususa ngaphambili kuka 3 amahora emva isenzo odlule futhi kungakadluli usuku ngemuva kokufaka.
Lapho nobunzima ekususeni Tampon kufanele bake bahlale phansi futhi ngokucophelela uyisuse ngeminwe yakho (efana yebhangqa udlawana). It is nhlobo ukuthatha okugeza bese uyobhukuda leli thuluzi ngo sangasese.
I CONCENTRATE ketshezi ukuba buhlanjululwe ngamanzi ukuthola ikhambi oyifunayo (1-12%). ifenisha, ebusweni endlini futhi imishini sanitary kufanele zihlanzwe amanikiniki ciki ukulungele kusho ngesilinganiso 150 ml / 1 sq. m ebusweni.
Imishini yezokwelapha futhi laboratory glassware liyadingeka shí ikhambi futhi uvale lid. Ngemuva kwamahora 2 badinga ukususa noma uxubha ngaphansi kwamanzi agobhozayo (3 amaminithi).
Kuye uhlobo izidakamizwa, benzalkonium chloride kungabangela ezahlukene engemihle. Ngekusetjentiswa yakhe yesikhathi eside ekutheni iziguli kaningi ukuthuthukisa ukucasuka bendawo nezinye komzimba.
Kwezinye amalungiselelo aqukethe?
Izindlela ethandwa kakhulu, okuhlanganisa chloride benzalkonium, imi kanje:
"Kataferm" - ekwakhiweni ezihlanganiswe lyophilisate kuyiphi ikhambi ibhalwe, bese ulisebenzise ngaphandle nge isilonda trophic, lezinkinobho, khona izifo ubovu, osteomyelitis futhi bartholinitis.
"Katatsel A" - inhlanganisela kusho ngesimo unamathisele, okuyinto kunomphumela spermicidal.
"Katatsel" - ukulungiselela edayiswa amaphilisi lwesitho sangasese sowesifazane kanye amaphilisi, suppositories, tampons, okhilimu bese unamathisela i-application yangaphandle. Anakho spermicidal, anti-fungal kanye isinqandakuvunda umphumela.
"Septolete" - inhlanganisela kusho okuhlanganisa benzalkonium chloride hhayi kuphela, kodwa futhi levomenthol, zikagamthilini leaf uwoyela, uphephamente futhi thymol. ifomu Isikali se-lozenges izidakamizwa ethulwa okuyinto umbukiso liphinyiselwe izakhiwo isinqandakuvunda.
"Isla-Mint": yokusetshenziswa. Incazelo yomkhiqizo, ukubuyekezwa, intengo
Kusho "Kreon" - Baby
Eye amaconsi 'Dexamethasone': yokusetshenziswa
"Tsarskoye Selo" - emnyuziyamu-reserve, okuvumela ukuba shí ngenkathi empresses
Indlela ukupheka amaqanda
"Femibion -1": kwengoma. "Femibion" kwabesifazane abakhulelwe: imfundo, ukubuyekezwa
"Zhukovsky" (amazambane ekuseni) ukubuyekezwa. Imbewu amazambane "Zhukovsky"